प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - YIC International International Co |तपाईंको इन्टरजेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आपूर्तिकर्ता |www।YIC-Electronics.com
घर > प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
YIC-Electronics.com के हो?
कहाँ YIC अन्तर्राष्ट्रिय आधारित छ?
म कसरी तपाईंको भाग खोज उपयोगिता प्रयोग गर्ने?
तपाईको कडा रेखा कार्ड के हो?
अर्डर कसरी गर्ने?
उत्पाद पृष्ठमा कुनै मूल्य छैन - म के गर्ने?
कुन ढुवानी तरीकाले सहयोग गर्न सक्छ?
तपाइँ कुन भुक्तानी विधिहरू प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
के म नेट सर्तहरू पाउन सक्छु?
तपाईंले बेच्ने पार्टर्समा वारेन्टी के हो?
के म वेबसाइटमा नयाँ अकाउन्टन सिर्जना गर्न सक्छु?
तपाईको कार्य कार्यालयको समय के हो?
YIC-Electronics.com YIC अन्तर्राष्ट्रिय कं, लिमिटेड को सम्बन्धित छ। YIC-Electronics.com जहाँ तपाइँ द्रुत इलेक्ट्रॉनिक घटकहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। २०० 2008 मा सुरू भएदेखि हामीसँग इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट इन्वेंटरी छ,4stock००० भन्दा बढी आईटमहरूको मूल्य रहेको कुल स्टक इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट निर्माताहरू र उनीहरूको अधिकृत एजेन्टबाट प्राप्त हुन्छ। यी सबै उत्पादनहरू तत्काल पूर्तिको लागि उपलब्ध छन्। सबै भागहरू ग्यारेन्टी १००% नयाँ मौलिक पूर्ण प्रकार्यहरू सहित।
हामी ह Hongक Kongमा २ 28 भन्दा बढी पेशेवरहरूको टोली हौं। YIC २०० 2008 देखि। हामी विश्वास गर्दछौं: गुण हाम्रो आत्मा हो।
हामीले हाम्रो ईन्वेन्टरी खोज्ने काम छिटो बनाएका छौं र हाम्रो साइटको कुनै पनि स्थानबाट सजिलो छ। कुनै पनि शीर्ष YIC-Electronics.com वेब पृष्ठमा, केवल तपाईंको अंश नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् र "खोजी" क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं परिणामहरूको सेट प्राप्त गर्नुहुनेछ, तपाईंले खोजिरहनु भएको अंश फेला पार्नुहोस्। त्यसोभए तपाईं उद्धरण वा RFQ अनलाइन अनुरोध सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो YIC सर्तहरूको बिक्री सहयोगी तपाईंलाई ईमेल मार्फत चाँडै मूल्य र वितरणको साथ सम्पर्क गर्नेछ।
हामी आईसी चिप्स र IGBT मोड्युलहरू इलेक्ट्रॉनिक्स घटक वितरकको लागि विशेष छौं।
आईसीएस वितरण ब्रान्डहरू: VISHAY / IR, NXP, ON, INFINEON, ST, NS, MICROSEMI, XILINX, एनालग उपकरणहरू, ALTERA, TI, LATTICE, प्रसारण, MAXIM, ATMEL, लाइनर, CYPPress, FIRCHILD, TOSHIBA, ACTEL, INTERS , PMC र अधिक।
IGBTs / FETs मोडुलहरू: SEMICRON, EUPEC, INFINEON, MITSUBISHI, FUJI, POWEREX, IXYS, IR, ASTEC र अधिक।
वेबसाइटबाट आरएफक्यू / उद्धरण सबमिट गरेर तपाईको प्रश्नहरूको अंश सूची र सम्पर्क जानकारीको साथ फारम भर्नुहोस्, वा ईमेल आरएफक्यू Info@YIC-Electronics.com, हाम्रो बिक्री तपाईंलाई ईमेल मार्फत तपाईंलाई उद्धरणको साथ सम्पर्क गर्दछ, तपाईंको पुनः कन्फर्म उद्धरण वा अर्डर स्वीकृत भएपछि, कृपया कृपया अनुमोदित अर्डर पठाउनुहोस् वा डेलिभरी जानकारीको साथ हाम्रो बिक्रीमा समाचार पुष्टि गर्नुहोस्, हाम्रो बिक्री सर्तहरू हाम्रो बैंक जानकारीको साथ प्रोफार्मा इनभ्वाइस पठाउँदछ तपाईं कृपया सहि भाग नम्बर, आवश्यक मात्रा र निर्माता संकेत गर्न याद गर्नुहोस्।
तपाईं पठाउन सक्नुहुन्छ RFQ / उद्धरण (URL: https: // www। yic-electronics.com /RFQ-Quote.htm ) अनलाइन जाँच गर्नुहोस् वा हामीलाई कल गर्नुहोस् वा हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् Info@YIC-Electronics.com मूल्य र स्टक जानकारी पुन: जाँच गर्न। हामी चाँडै नै तपाइँको लागि हाम्रो उद्धरण प्रस्ताव गर्नेछौं र तपाइँको पुष्टिकरण अर्डर पछि, हामी तपाइँको भुक्तानी गर्न को लागी हाम्रो प्रोफार्मा चलानी पठाउँनेछ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय कुरियरहरू जस्तै DHL, FedEx, UPS, TNT र EMS वा ह Hongकong मेल प्रयोग गरेर हामी विश्वव्यापी जहाज गर्दछौं। सामान्य हामी DHL / FedEx प्रयोग गर्दछौं। हामी ग्राहकको फ्रेट खाता पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। मानक डेलिभरी समय १--4 व्यवसाय दिन (सामान्य २-day दिन) गन्तव्यमा निर्भर गर्दछ। अन्य शिपिंग विधिहरू छलफल गर्न सकिन्छ। हामी हरेक ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयास गर्दछौं।
अधिक विवरण: URL: https: // www। yic-electronics.com / शिपमेंट-way.htm
हामी नयाँ ग्राहकहरूको पहिलो अर्डर को लागी तार स्थानान्तरण भुक्तानी स्वीकार गर्दछौं। भुक्तान विधि: वायर ट्रान्सफर / टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (T / T) हाम्रो HSBC खाता, वेस्टर्न यूनियन, पेपाल (क्रेडिट कार्ड) मा। हामी विशेष ग्राहकको लागि अन्य भुक्तानी तरीका स्वीकार गर्दछौं। नेट टर्म केवल दीर्घकालीन सहयोग क्लाइन्टको लागि। बैंक शुल्कहरू बारे: वायर ट्रान्सफर बैंक USD15.00 देखि USD30.00 शुल्क, HK HSBC बाट HK HSBC, कुनै शुल्कको आवश्यकता पर्दैन। कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामी अमेरीकी र यूरो, GBP, HKD मा भुक्तानी स्वीकार गर्दछौं।
अधिक विवरण: URL: https: // www। yic-electronics.com / payment-way.htm
हामीसँग चलिरहेको दोहोर्याउने ग्राहकहरूदेखि एक-समयका ग्राहकहरू सम्मका ग्राहकहरूको संख्या छ। नेट सर्तहरू हामीसँग सफल भुक्तान ईतिहास अनुसरण गर्दै ग्राहकहरूको दोहोर्याउन विस्तार गर्न सकिन्छ।
हामी 60० दिन वा सो भन्दा बढि क्वालिटी ग्यारेन्टी गर्दछौं, किनकि पार्ट्स पठाइएको थियो। हाम्रा सबै भागहरू हाम्रो आफ्नै कन्फर्मेसन सर्टिफिकेटको साथ आउँदछ जुन ग्यारेन्टी गर्दछ कि पार्टहरूले सम्पूर्ण विनिर्माण विवरणहरूको पूरा गर्दछ। सबै भागहरू निरीक्षण र शिपमेंट भन्दा पहिले १००% नयाँ मूल अंश सुनिश्चित गर्दछ। यदि तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको पार्टहरूले फाराम पूरा गर्दैन भने, फिट र निर्माताको प्रकार्य चश्मा, हामी भागहरू प्रतिस्थापन गर्दछौं वा तपाईंको पैसा फिर्ती गर्दछौं। हाम्रो नीति हो: यदि भागहरू गैर-कार्यात्मक कारणहरूको लागि आउँदो निरीक्षणमा अस्वीकार गरिन्छन्, तपाईं एक आरएमए अनुरोध गर्न १ 15 व्यापार दिन भित्र हामीलाई सम्पर्क गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईंसँग उत्पादन, स्थापना वा परीक्षणको बेला पार्टहरूसँग कुनै असफलता वा समस्याहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्: Info@YIC-Electronics.com
तपाइँ "मेरो खाता" सिर्जना र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ रेजिस्टर गर्न वा साइन इन गर्न र वेबसाइट पृष्ठको शीर्षमा। त्यहाँ तपाइँ तपाइँको खोजी सूची फेला पार्नुहुनेछ र तपाइँको सम्पर्क जानकारी र वितरण जानकारी सम्पादन गर्नुहोस्।
उद्धरणको लागि, हामी तपाईंलाई ईमेलमा पठाउनेछौं, ताकि तपाईं विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वा हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् Info@YIC-Electronics.com
हाम्रो कार्यालयको समय सोमबार छ। शुक्रबारको माध्यमबाट AM9: 30 --- PM11: 00 शनिबार AM10: 00 --- 12:00 (ह Hongकong मानक समय)
तपाईंको समर्थनलाई धन्यवाद। यदि कुनै थप प्रश्न वा जिज्ञासा छन् भने, कृपया हामीलाई ईमेल गर्नुहोस्। हाम्रो ईमेल ठेगाना: Info@YIC-Electronics.com